The Sims မိုဘိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
အကောင်းဆုံး Apps ကပက Android Apps ကပလက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက် Download
မီဒီယာ & ဗွီဒီယို
အခမဲ့ VPN ကို
APK ကို အက်ပ်များ
07/11/2018 08/11/2018 admin ရဲ့ the Sims, The Sims မိုဘိုင်း, The Sims မိုဘိုင်း APK ကို, The Sims မိုဘိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်
The Sims မိုဘိုင်း APK ကို:
the Sims4မိုဘိုင်း Apk
The Sims မိုဘိုင်း Apk Mod
The Sims မိုဘိုင်းအခမဲ့ Download
The Sims မိုဘိုင်း Apk Unlimited ငွေ
The Sims မိုဘိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်:
Express your creativity by adapting the different looks and unique personalities of your Sims, adding features and having fun with fashion and hairstyles. Easily build your Sims foraperfect home, choose your favorite designs and decor with more details than ever before on your phone. Experience the rich and entertaining moments in your Sim’s life as you achieve your career goals, ဝါသနာကိုလိုက်, build relationships, and improve your lifestyle. Celebrate with friends, make contacts in the city, participate in special events and give your favorite Sims stickers. Which stories will you tell?
Customize the looks, ဆံပင်ပုံစံတွေ, မတ်မတ်, make-up and accessories of the Sims. From nose to toe, there are endless possibilities! Then put togetheramemorable wardrobe when you team up with Izzy Fabulous at the fashion shop. For each Sim, select personality traits such as Active or Musical and add more as your Sims gain life experience.
Lead your Sims’ stories from careers and hobbies to relationships and families. Decide on exciting careers like fashion designer and doctor, နှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ဂစ်တာတီးခတ်တူသောဝါသနာ. အခြားအ Sims နှင့်အတူဖော်ရွေများနှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးရှိသည်နှင့်တစ်ဦးနမ်းကြိုးစားနေသို့မဟုတ်တစ်ခုစမ်းသပ်စာရွက်တီထွင်တူသောအန္တရာယ်များလုပ်ရပ်များယူ. တစ်မိသားစု Start နှင့်အစွမ်းထက်အမှေပုံပါအထူးပစ်စညျးအပေါ်ဖြတ်သန်းနေဖြင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့လမ်းကြောင်းကိုဖန်တီး.
အခြားအ Sims နှင့်အတူပါတီများ Host နှင့်တက်ရောက်ရန်, သငျသညျဆုလာဘ်သွားလာခြင်းနှင့်ဝင်ငွေနိုင်သောနေရာ. သင့်ရဲ့ကြီးမြတ်အိမ်ကမိတ်ဆက်, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုး, ပင်အခြားလူများရဲ့ Sims နှင့်အတူရေးဆွဲရန်ရွေးချယ်. အထူးနေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါ, ကဲ့သို့: B က. အဆိုပါပန်းခြံဒါမှမဟုတ်စျေးရင်ပြင်ဂီတပွဲတော်အတွက်မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့. လည်း, အခြားအ Sims တွေ့ဆုံရန်’ သူတို့ချစ်စရာဆိုရင်သူတို့ကိုသိစေရန်ပါတီများမှာဒါမှမဟုတ်မြို့နှင့်အသုံးပြုမှုစတစ်ကာများအတွက်ကစားသမား, ပူသော, သို့မဟုတ်အလွ!
သင်သည်သင်၏ Sims ဘို့ကြီးတွေနှင့်အသေးစားအချိန်လေးဖန်တီးအဖြစ်ချိတ်ဆက်သူတို့ The Sims မိုဘိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဦးဆောင်လမ်းပြဘယ်မှာကြည့်ဖို့အဆုံးမဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်!
အရေးကြီးစားသုံးသူသတင်းအချက်အလက်များ. ပြထားတဲ့ပုံရိပ်တွေ၏အချို့အတွက်-app purchase ပါဝင်နိုင်ပါသည်. ဒီ app: အမြဲတမ်းအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်ပါတယ် (ကွန်ယက်ကိုအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်). EA ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်ကွတ်ကီးပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်များ၏ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်. In-ဂိမ်းကြော်ငြာပါရှိသည်. Third-party analytics နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးဒေတာတွေကိုစုသိမ်း (အသေးစိတ်ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်ကွတ်ကီးပေါ်လစီတွေ့မြင်). ကစားသမားဂိမ်းထဲမှာပါတီချက်တင်အင်္ဂါရပ်ကတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်. တစ်ပစ်မှတ်အုပ်စုရည်ရွယ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်ဝဘ်ဆိုဒ်များတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါဝင်သည် 13 သို့မဟုတ်ကျော်. ဒီ app ကို Google Play ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်. Google ကနေ log out သင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ရဲ့ဂိမ်းမျှဝေချင်ကြဘူးလျှင်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီဂိမ်းန်ဆောင်မှုများ Play.
http သွားရောက်ကြည့်ရှု://help.ea.com အကူအညီများသို့မဟုတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များများအတွက်
EA ၏ပြီးနောက်အွန်လိုင်း features တွေထဲကရွေးချယ်စေခြင်းငှါ 30 www.ea.com/service-updates မှာရက်ပေါင်း.
ဗားရှင်း: 11.0.1.168833 (44)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာလ ,08, 2018
ဖိုင်အရွယ်အစား: 88 mb
The Sims မိုဘိုင်း .apk Download
The Sims မိုဘိုင်း 11.0.0.167828 .APK ကို
The Sims မိုဘိုင်း 10.1.0.158018 .APK ကို
The Sims မိုဘိုင်း 9.3.0.148139 .APK ကို
Zynga Poker APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Microsoft က Cortana APK ကိုဒေါင်းလုပ်
မင်းတို့သည်မိုဘိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့မဟာဗျူဟာ GAME
Ragnarok M ကထာဝရမေတ္တာကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်
The Sims မိုဘိုင်း APK ကိုဒီနေရာတွင် Download
← IFTTT APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Blumentals WeBuilder 15.4.0.206 ဘာသာပေါင်းစုံ →
VidMate HD ကို Video Downloader ကို Download လုပ်ပါ | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
အန်းဒရွိုက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် ac Market က | လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ဆယ်ကျော်သက် Patti - အိန္ဒိယ Poker APK ကိုဒေါင်းလုပ် - လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Ludo ဘုရင်က APK ကိုအခမဲ့ Download, | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Android အတွက် xHubs APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Android အတွက် VidMate - APK ကိုဒေါင်းလုပ် - လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
PUBG မိုဘိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ် - လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Google Play စတိုး APK ကိုဒေါင်းလုပ် | လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
စစ်သည်များ Orochi3အန်းဒရွိုက် PSP iso (ယူအက်စ်အေ) အင်္ဂလိပ် patch အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်အတူ
မူပိုင် © 2019 မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.